अव जापानमा पृथ्वीदेखि अन्तरीक्षसम्मको लिफ्ट ! – Todays Nepal
अव जापानमा पृथ्वीदेखि अन्तरीक्षसम्मको लिफ्ट !
जमिनबाट आकाशसम्मको लिफ्ट साँच्चिकै सम्भव छ त ? एउटा जापानी कम्पनी अहिले यसलाई सम्भव बनाउने तरखरमा गम्भीर भएर लागिपरेको छ । उनीहरुका अनुसार आगामी २०५० सम्म पर्यटकले उक्त लिफ्ट प्रयोग गरी आकाश र अन्तरिक्षसम्म पुगी ग्रहको अवलोकन गर्न पाउनेछन् । जापानका वैज्ञानिक बोफिनले २०५० सम्म यस्तो गज्जबको यात्रा सम्भव बनाउने योजना तयार पारिरहेका छन् । यो सम्भव पार्नका लागि ९६ हजार किलोमिटरको लिफ्ट निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताएका हुन् ।
उनले जापानी निर्माण कम्पनी ओबायशीसँग यसबारेमा छलफल गरिरहेको बताएका हुन् । यो कम्पनीले पहिलेबाटै मानिसहरुलाई मंगल ग्रहको भ्रमण गराउने प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छ । वैज्ञानिक बोफिनले आफ्नो योजना अन्तर्गत कम्प्युटर मोडल पनि तयार पारिसकेका छन् । यसलाई बनाउनका लागि कार्बन न्यानो ट्यूब केबलको प्रयोग गर्ने उनले जानकारी दिए । सो केबल अहिलेसम्मको सबैभन्दा हल्का र बलियो केबल हो । यस योजनालाई २५ वर्षभित्र पूरा गर्ने उनको लक्ष्य रहेको बोफिनले बताएका छन् ।
ज्यादै महङ्गो र जोखिमयुक्त योजना यस्तो लिफ्ट १३ हजार टन तौलमा निर्भर रहनेछ र यो योजना सफल रह्यो भने यसले १०० टन बराबर मानिसलाई अन्तरिक्षसम्म पुर्याउन सक्नेछ । यो अवस्थामा विशेषज्ञहरुले यसलाई धेरै महङ्गो र खतरनाक कदम हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसबारेमा कम्पनीले चाहिँ अहिले यो असम्भव लागेपनि भविष्यमा यसलाई बुझ्न धेरै सजिलो हुने र यो सम्भव समेत हुने बताएको छ । यस्तो लिफ्ट वास्तवमै बन्न सक्यो भने अन्तरीक्ष र मानिसबीचका सबै दुरी समाप्त हुने बताइएको छ ।
आज गिरीजाप्रसाद कोइरालाको स्मृति दिवस,तर किन गरेनन् काँग्रेसले कुनैपनि औपचारिक कार्यक्रम?
काङ्ग्रेस पदाधिकारी : उपसभापतिमा गोपालमान, महामन्त्रीमा आरजु